nattalin: program လေး လုပ်ကြည့်မလား?
program လေး လုပ်ကြည့်မလား?
အောက်ကCodeတွေကို notepad ပေါ်တင်ပါမကြောက်ပါနဲ့ အသေးစားလေးတွေပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်ဖွင့်မှ ပွင့်နိုင်မယ့် program လေးတွေပါ။
1-သင့် CD Drive ကိုဆက်တိုက်ပွင့်နေပါလိမ့်မယ်။ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ပေါ့။
2Caps Lock ကိုဆက်တိုက်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။
3ဒါလေးကသင့်ကွန်ပြူတာကို မက်ဆေ့ ပေးပြီး shutdown ကျသွားစေပါတယ်။
4-Enter key ကိုဆက်တိုက်နှိပ်နေမှာပါ။
5-CMD နဲ့ Notepad တွေရပ်မရအောင်ဆက်တိုက်ဖွင့်တာလေးပါ။ဒါလေးကနဲနဲလေးဆိုးတယ်။
7.သင့် keyboard လေးကိုဟက်ပြီး သင်ဟာအရူးဆိုပြီးသင်စာရိုက်တိုင်းပေါ်နေမှာပါ။
စက်အတွက်တော့မပူနဲ့ စမ်းမယ်ဆို စမ်းကြည့်ပေါ့ ဗဟုသုတရပါတယ်..ပျော်စရာ လည်ကောင်း တယ် မရတဲ့အဆုံး Restart ချလိုက်ပါ....ကျနော်ကတော့ စမ်းတယ်ဗျ..စမ်းတာမှ အကုန်စမ်းတာ